Kodzero-dzevanhu, 08 Chikumi 2017
China 8 Chikumi 2017
Vakapona Mutsaona yeBhazi kuNyamakate Votaura Zvakaitika
Mumwe wevapona mutsaona iyi, VaTapiwa Sande, vati tsaona iyi yaitika apo bhazi reKing Lion iro ranga richibva kuHarare richienda kuLusaka, Zambia, ranga richimhanya zvakapfuura mwero ndokuputika vhiri rekumberi ndokubuda mumugwagwa ndokusvikorovera pamuti.
Veruzhinji Voratidzwa Zvinoitwa Muparamende
VaMudenda vati kunyange hazvo paramende iine nhengo dzinobva kumapato akasiyana siyana, nhengo idzi dzinobatana nekuita basa radzo nemazvo mumakomiti.
VaComey Vanoti America Yakanyeperwa Zvavakadzingwa Basa
VaJames Comey vamira pamberi pekomiti yedare reseneti inoona nezvekusora muAmerica vachipa humbowo pamusoro pekufambidzana pamwe nekudyidzana kwavo nevaimirira bato reRepublican musarudzo, avo vave mutungamiri wenyika VaDonald Trump.
Chikumi 07, 2017
Vanhu Vomhanyira kuChirundu Kunotenga Bond Notes neMadhora ekuAmerica
Mumwe wevanotengesa mari paChirundu, VaLaxon Mwale, vanoti vanhu vakawanda vari kuuya nemabond notes vachida mari yekuAmerica kana yekuZambia.
VaMnangagwa Vanoudza Varimi Kuti Vabhadhare Zvikwereti
Vachitaura pamusangano wekuedza kutsvaga nzira dzekusimbaradza chirongwa chekuvandudza nyaya dzekurima cheCommand Agriculture waitwa muHarare neChitatu, VaMnangagwa vati kunyange hazvo nyika iri kutarisira goho rakanaka mwaka uno, varimi havafaniri kumirira kupihwa mbeu nefotereza zvemahara.
Mabhishopu eRoman Catholic Okurudzira Sarudzo Dzakachena Munyika
Sangano reZimbabwe Catholic Bishop’s Conference raburitsa tsamba yakanangana nesarudzo dzegore rinouya kana kuti “Pastoral Letter of the Zimbabwe Catholic Bishops On Preparing for the Zimbabwe 2018 National Elections.”
Zvimwe Zvizvarwa zveZimbabwe Zvotya Kumutsiridza Magwaro eKutsvaga Hupoteri muSouth Africa
Sangano rinobatsira vana veZimbabwe vari munyika iyi, reZimbabwe Exiles Forum, rinoti vanhu vangangosvika zana vari kusungwa pasvondo pamahofisi ebazi rezvemukati menyika vachiendeswa kukamba yeLindela vamirira kudzoserwa kumusha.
America Inovimbisa Kuramba Ichitsigira Chirongwa chePepfar muZimbabwe
Mutevedzeri wemunyori anoona nezvedunhu reAfrica muhurumende yeAmerica, Amai Carol Thompson O’Connell, vanoti mari yekurwisa HIV/Aids inopihwa Zimbabwe nehurumende yenyika yavo haisi kuzoderedzwa.
Amai Mujuru Vanoti Ndivo Vane Mukana Wekuita Mutungamiri weMubatanidzwa weMapato
Asi nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika, uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazano re Zimbabwe Democracy Institute, VaPedzisayi Ruhanya, vanoti zviri kutaura Amai Mujuru hazvina maturo nekuti simba rekuve mutungamiri wehurumende rinobva kuvanhu kwete kumauto.
Transform Zimbabwe Inoti Misangano Yayo Iri Kuvhiringidzwa neMapurisa